जित सुनिश्चित छ ,घोषणा गर्न मात्रै बाकी छ :रामदयाल गुप्ता,वडाअध्यक्ष उम्मेदवार
ujyalosandesh online २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार १३:२४ मा प्रकाशित
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट
सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६, रुपन्देही
चुनावीअभियान कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
घरदैलो अभियानलाई तीव्रतादिइरहेका छौं । घरदैलोमापुग्दा यसपटक एमालेका उम्मेदवारहरुले जित्ने सुनिश्चितभइसकेको जानकारी पाइरहेका छौं । जनताबाटआर्शीवादलिइरहेका छौं ।
चुनावजित्ने आधार के के हुन् ?
विगत २० वर्षदेखि सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेर जनताको पक्षमाकामगर्दै आएको छु । वडाबासी र विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वयगर्दै विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउँदै आएको छु । गत २०७४ सालको स्थानीयतहको निर्वाचनमा वडाअध्यक्ष पदमाउम्मेदवार भइ दोस्रो स्थानप्राप्त गरेको थिए । निर्वाचनमा दोस्रो स्थानप्राप्त गरे पनिअग्रस्थानमा रहेर जनताको सेवागर्दै आएको छु । यो कुरा मैले भन्नु भन्दापनिजनताले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । जनतासँगनजिकभएर उहाँहरुको घरदैलोमापुगेर सेवागरिहरेको छु । मेरो चुनावजित्ने मुख्यआधार भनेकै सम्मानितजनताको अमूल्यमतहो ।
मतदाताले तपाईलाई नै किनजिताउने ?
मतदातालेमलाई नै किनजिताउने भन्ने कुराको आधार मैले हालसम्म गरेकाकामहरु नै हुन् । अहोरात्रजनताको सेवामानिरन्तर लागेको छु । अहिले जुन स्थानमा वडा कार्यालय बनेको छ, त्यो कार्यालय बनाउनकालागिविगतमाहामीले संघर्ष गरेको थियौं । मतीनदिन हिरासतमाथिए । अहिले वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकीबनेको छ । मैले जितेपछि स्वास्थ्यचौकीबाटै वडाबासीका लागिएम्बुलेन्सको व्यवस्थागर्नेछु । वडाका उम्मेदवारहरुमध्ये सबैभन्दा बढी जनताको सेवामालाग्ने व्यक्ति रामदयालगुप्ताहो भन्ने कुरा मतदाताबाट सुनिरहेको छु । त्यसैले म लगायत मेरो टीममा रहेका वडा सदस्यकाउम्मेदवारअनिताथापा, स्वेताकुमारी हरिजन, मोहम्मदअकिल मुसलमान र राम प्रसादश्रेष्ठ तथाएमालेबाट नगरप्रमुखकाउम्मेदवार डा. रामप्रसाद बस्याल र उपप्रमुखकाउम्मेदवार उमा अधिकारीलाई मतदाताले अत्याधिकमतले जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरामाविश्वस्त छौं । सिद्धार्थनगरको जनताको चाहना नै एमालेलाई जिताउनु हो ।
वडाको विकासकालागितपाईंका योजना र प्राथमिकता के के छन् ?
वडाभित्र रहेको श्री महात्मा बुद्ध माध्यमिकविद्यालयको स्तरोन्नतितथाप्राविधिकशिक्षाको व्यवस्थागर्नेछु । शिक्षा, स्वास्थ्यतथा रोजगार, सडक, नालालगायतको उचितव्यवस्थागर्नेछु । झुटा आश्वासनदिन सक्दिन । जे बोल्छु त्यो गरेर देखाउँछु । विगतमापदमानहुँदापनिजनताको सेवामालागेको हुँ । योजना र प्राथमिकताको बारेमाभन्नुपर्दा अहिले चुनावी प्रतिवद्धता पत्रबनाइएको छ । मुख्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमाकामगर्ने योजना र प्राथमिकता रहनेछ । युवायुवती, महिला, वृद्धवृद्धा, उद्योगी, व्यवसायीलगायतलाई समेटेर योजनाबनाइनेछ ।
वडाका मुख्य समस्याका के के छन् ?
वडामा समस्याहरु धेरै नै छन् ।विगत ५ वर्षमा वडामा कतिकामभएत्यो वडाबासीलाई सोधे पनि धेरै कुरा थाहापाउन सकिन्छ । वर्षायाममायहाँडुबान हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमापनिअपेक्षित रुपमाविकास हुन सकेको छैन । वैशाख ३० गते हुने स्थानीयतहको निर्वाचनमामलाई मतदाताले जिताउनुहुनेछ भन्ने कुरामाविश्वस्त छु । जितेपछिजनताको काममा लाग्छु र वडामा भएका समस्याहरुको समाधानगर्नेछु ।
वडामायहाँको मुख्यप्रतिष्पर्धी पार्टी कुनहो ?
मुलुकको ठूलोपार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) हो । अहिलेसम्म वडामा मुख्यप्रतिष्पर्धी पार्टी कुनहो भनेर थाहापाउन सकेको छैन ।
राजनीतिकदलका नेतातथाकार्यकर्ता निर्वाचनको बेलामात्र घरदैलोमा आउँछन्, अन्य बेलाआउँदैनन् र निर्वाचनजितेपछि पनिजनतालाई बिर्सछन् भन्ने गुनासो छ नी?
म त्यस्तो नेताहोइन । मनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नेताहुँ । म जनताको सेवकहुँ । २०७४ सालको निर्वाचनमादोस्रो स्थानल्याएर पराजितभएपनि म जनताको घरदैलोमापुगेर निरन्तर उहाँहरुको सेवामालागिरहेको छु । निर्वाचनमा पराजितभएर जनताबाट टाढा थिइन् र जितेपछि त जनताबाट टाढा हुने कुरै हुँदैन ।
देश र जनताको पक्षमाकामगर्ने पार्टी नेकपा (एमाले) हो । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमाएमालेको चुनावचिन्ह सूर्यमामतदान गरी मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई अत्याधिकमतले विजयी गराइदिनुहुनसम्मानितजनतामाविनम्र अनुरोध गर्दछु । यहाँहरुकै सल्लाह सुझावअनुसार अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्तगर्दछु ।
सनोज कुमार यादवलाई भोट किन ?